ယဉ် ကျေး မှု မ ရှိ တဲ့ လူ တစ် ယောက် ရဲ့ အ ပြော အ ဆို ကြောင့် တော် တော် လေး စိတ် ဆိုး နေ တဲ့ အေ သင် ချို ဆွေ - Real Gaming Myanmar
ယဉ် ကျေး မှု မ ရှိ တဲ့ လူ တစ် ယောက် ရဲ့ အ ပြော အ ဆို ကြောင့် တော် တော် လေး စိတ် ဆိုး နေ တဲ့ အေ သင် ချို ဆွေ
ပ ရိ သတ် တွေ ချစ် ကြ တဲ့ အ ဆို တော် အေ သင် ချို ဆွေ က s i n g lem o t her တစ် ယောက် အ နေ နဲ့ ဘ ဝ ကို ရဲ ရဲ ရင့် ရင့် ဖြတ် သန်း နေ တဲ့ စိတ် ဓာတ် ကြံ့ ခိုင် တဲ့ အ မျိုး သ မီး တစ် ဦး ပါ ပဲ ။
အေ သင့် ကို ချစ် ကြ တဲ့ ပ ရိ သတ် တွေ က လဲ အေ သင် ရဲ့ ဖြစ် တည် မှု ကို အား ပေး လက် ခံ ပြီး ချစ် ခင် အား ပေး ကြ ဆဲ ပါ ပဲ ။
ဒီ နေ့ မှာ တော့ အေ သင် ချို ဆွေ က ယဉ် ကျေး မှု မ ရှိ တဲ့ လူ တစ် ယောက် ရဲ့ အ ပြော အ ဆို ကြောင့် တော် တော် လေး စိတ် ဆိုး နေ တာ ကို တွေ့ ရ ပါ တယ် ။
အေ သင် ချို ဆွေ က “ ကျွန် မ က ‘ ဝ ’ တယ် လေ ၊ ဘာ ဖြစ် လို့ လဲ ? ကျွန် မ က ရှင့် ခေါင်း ပေါ် တက် ထိုင် နေ လို့ လား ? ဟုတ် တယ် … သူ များ က လေး အ မေ တွေ က အ ပျို တောင် ရှုံး တယ် လှ ကြ တာ ” လို့ လာ မ ယှဉ် နဲ့ လေ ။ ”
“ အဲ့ လို ယှဉ် ပြီး ပြော တာ လောက် မုန်း တာ မ ရှိ ဘူး ။ လူ တိုင်း မှာ သူ့ တန် ဖိုး နဲ့ သူ ရှိ ပြီး သား ။ ယှဉ် စ ရာ ကို အ ကြောင်း မ ရှိ ဘူး ။ စေ တ နာ နဲ့ လည်း မ ပြော နဲ့ ကိုယ် လည်း ဘာ မှ လုပ် ပေး တာ မ ဟုတ် ပဲ နဲ့ ။ ( ပါး စပ် စေ တ နာ က အ ပြော မ တတ် ရင် ထ မီ လှန် ပြ သ လို ပဲ တဲ့ နော် ။ ) ”
“ ( ကျွန် မ နေ ရာ က နေ တ ရက် လောက် လာ နေ ကြည့် ပါ လား ( ရူး တောင် သွား မယ် ) ကျွန် မ က သူ တို့ လို မ လှ တာ နဲ့ သေ ပေး ရ မှာ လား ? ကျွန် မ က ကျွန် မ ပဲ ။ ကျွန် မ ဘ ဝ နဲ့ ကျွန် မ ။ ကျွန် မ ခံ ယူ ချက် နဲ့ ကျွန် မ ။ ကျွန် မ အ လှ နဲ့ ကျွန် မ ။ ”
“ ဒီ နိုင် ငံ မှာ “ ဝ ” တယ် ဆို တာ နဲ့ ကဲ့ ရီ စ ရာ စောက် ခွက် ပြောင် စ ရာ ကြီး ကို ဖြစ် လို့ ။ အဲ့ ဒီ အ စွဲ တွေ ကို ချွတ် ပစ် မှာ မ ပူ နဲ့ ။ ကွယ် ရာ မှာ ပြော ချင် ပြော $ ဂ ရု မ စိုက် ဘူး ။ ဒဲ့ တော့ လာ မ ပြော နဲ့ အာ မ မ ခံ နိုင် ဘူး ။ ” ဆို ပြီး ပြော ထား ပါ တယ် ။
အေ သင် ချို ဆွေ လို သည်း ခံ နား လည် တတ် တဲ့ လူ တောင် အ ခု လို တော် တော် လေး စိတ် ဆိုး နေ ရ တာ ဖြစ် ပါ တယ် ။
အ ချိန် ပေး ပြီး ဖတ် ရှု ပေး တဲ့ ပ ရိ သတ် ကြီး ကို ကျေး ဇူး အ ထူး တင် ရှိ ပါ တယ် ။
Previous: ရိုး သား တဲ့ ဒေ သ တွေ မှာ အ များ တ ကာ မ သိ ဖျက် ​စီး ခံ​ နေ ရ တဲ့ ​ဆ ရာ မ ​လေး​ တွေ ရဲ့ ဘ ဝ များ
Next: ကု မ္ပ ဏီ က အ လုပ် ထုတ် တာ ကို မ သိ ပဲ ( ၄ ) နှစ် လုံး လုံး လ စာ တွေ သွား သွား ကောက် နေ ခဲ့ တဲ့သန့် ရှင်း ရေး ၀န် ထမ်း